Xiddiga qadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka oo dhalleeceeyay xadgudubka warbaahinta bulshada loogu geysto.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Xiddiga qadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka oo dhalleeceeyay xadgudubka warbaahinta bulshada...
Xiddiga qadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka ayaa dhalleeceeyay xadgudubka warbaahinta bulshada ee loogu talagalay qoyskiisa wuxuuna rumeysan yahay in farriimaha noocan oo kale ah ay yihiin ‘dil kubbadda cagta’.
Swiss-ka ayaan ka ahayn wax qariib ah oo ku saabsan xadgudubka khadka tooska ah ee internetka, isagoo sheeganaya inuu helay hanjabaado shaqsiyadeed iyo farriimo karaahiyo ah oo qoyskiisa looga soo diray ka dib ciyaartii Premier League ay la ciyaareen Crystal Palace bishii Oktoobar 2019.
28-jirkan ayaa ka falceliyay kaftanka dadkii badnaa markii la bedelay isagoo u muuqday inuu u sheegay taageerayaasha ‘f *** off’ oo uu dhegta ka taagay isagoo ka jawaabaya markii uu ka baxayay garoonka Emirates Stadium. .
Wuxuu raaligelin ka bixiyay dhacdada barta Instagram maalmo kadib laakiin wuxuu cadeeyay in xaaskiisa Leonita – oo hada uur leh cunuggooda labaad – iyo gabadha yar ee Ayana ay sidoo kale bartilmaameed u ahaayeen xadgudubka.
Shirkadda farsamada ee UK ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday horaantii bishaan in kuwa neceb – oo qaarkood loo aqoonsaday inay yihiin taageerayaasha Arsenal iyo kuwa heysta tikidhada xilli ciyaareedka – ay ku galeen Xhaka khadka tooska ah ka dib markii uu kaarka cas ka qaatay kooxda Burnley bishii december.
Hada furitaanka faallooyinka uu ka helay warbaahinta bulshada ka hor kulanka muhimka ah ee Europa League wareega ee 32 da ay la yeelanyaan Benfica, Xhaka wuxuu dhaleeceeyay kuwa bartilmaameedsaday qoyskiisa wuxuuna sheegay in kubada cagta la dili karo hadii dhacdooyinka noocaas ah ay sii socdaan.
‘Haddii aan tuso kuwa kale waxa ay qorayaan, waxaan u maleynayaa inay tahay inaan xiro warbaahinta bulshada, qof walba waa inuu xiraa warbaahinta bulshada,’ ayuu yiri Xhaka.
‘Waxaan dhahayaa taas ka hor waxaanan dhihi doonaa hadda iyo mustaqbalka sidoo kale, waa aniga aniga. Waxaan ahay ninka garoonka ku jira.
‘Ma ahan xaaskeyga, maahan kan yar, ma ahan qoyskeyga. Marka haddii aad rabto inaad dhalleeceyso qof, dhib malahan inaad igu dhaleeceyso sida qof oo kale, sida ciyaartoy. Laakiin ha ka dhigin dadka kale inay ku lug yeeshaan maxaa yeelay wax shaqo ah kuma lahan shaqadayda.
Dhibaatadu waa kaliya haddii aad lumiso, markaa waa dhibaato. Dhibaato maahan markii aad guuleysato. Hadaad lumiso, qof walbaa wuu ku neceb yahay, qof walbaa wuxuu kuu qorayaa waxyaabo sida…it Suuragal maahan in la fahmo sida ay wax u qori karaan wax sidan oo kale ah oo aad ogtahay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo dadka wax ii qora, oo aan la fadhiisto, indhaha indhaha ku hayo oo aan weydiiyo, ” maxaad sidan oo kale wax ugu qortaa?”
Tani lama aqbali karo. Marka waa inaad indhahayaga furtaa oo aad wax badan ilaalisaa, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inaad disho kubada sidan oo kale haddii dadku bilaabaan inay ka hadlaan ciyaaryahan ama qoysaskooda ama waxyaabo sidan oo kale ah.’
Xhaka ayaa markii dambe laga xayuubiyay kabtanka kooxda Unai Emery waxaana lagu wadaa inuu dib ugu laabto Bundesliga isagoo lala xiriirinayey Hertha Berlin sanadkii hore suuqa kala iibsiga.
Laakiin Mikel Arteta wuxuu bedelay ninka ay isku wadanka yihiin Emery bishii Diseembar 2019 wuxuuna Xhaka ku adkeystay inuu sii joogo waqooyiga London Xhaka ayaa intaas raaciyay: “Qof walba wuu ogyahay inuu yahay mid ka mid ah sababaha aan wali ugu sii jiro kooxdan Waxaan leenahay xiriir weyn.
Uma imaanin naadigan labo ama seddex sano, waxaan halkaan u imid muddo dheer. Wixii aan haystay hal sano ka hor, qofna kuma fikirin inaan weli halkaan joogi doono.
Tani waa kubada cagta. Qof walba wuu ogyahay qandaraaskeyga ka dib xilli ciyaareedkan inuu labo sano ka badan yahay. Aad ayaan u faraxsanahay. Aynu aragno waxa dhaca.’
Previous articleNeil Lennon oo iska casilay shaqada kooxda Celtic kadib waqtiyo xun oo soo wajahay.
Next articleJordan Henderson oo 12 Isbuuc garoomada ka maqnaan doona